Wonder Woman – Gold Channel Movies
Video Sources 84248 Views
Power. Grace. Wisdom. Wonder. May 30, 2017 US. 141 Min. PG-13
“Wonder Woman” (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
“သမိုင်းရာဇ၀င်တွေ မစတင်ခင်ကာလ … ။”
“ကမ္ဘာမြေကို နတ်ဘုရားတွေစိုးမိုးခဲ့စဉ်အချိန်မှာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး Zeus နတ်ဘုရားက လူသားတွေကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် Zeus သားတော် စစ်နတ်ဘုရား Ares ရဲ့စနက်ကြောင့် ပင်ကိုက ရဲရင့်ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့ ဒီလူတွေမှာ မနာလို၊ သံသယစိတ်တွေ ကြီးထွားလာပြီး ကမ္ဘာကို စစ်မီးလျံတွေ လောင်ကျွမ်းလာခဲ့တဲ့အတွက် ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကိုကုစားဖို့အတွက် Zeus က Amazon လူမျိုးတွေကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပေမယ့် Ares ကြောင့် ဒီငြိမ်းချမ်းမှူဟာလည်း ခေတ္တသာခံခဲ့တယ်။”
“တစ်လောကလုံးကို စစ်ပွဲတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းစေဖို့ ကြံရွယ်ထားတဲ့ Ares က နတ်ဘုရားတွေအကုန်လုံးကို သုတ်သင်ပြီး သူ့အကြံကို အကောင်အထည်ဖော်ခါနီးမှာ Zeus ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတေးပြီး Ares ကို တားဆီးလိုက်ပေမယ့်၊ နောင်တစ်ချိန်မှာ Ares ပြန်ပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကို ကြိုသ်ိနေတဲ့အတွက် သူ့ကိုနှိမ်နင်းနိုင်မယ့် လက်နက်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး Amazon လူမျိုးတွေနဲ့အတူ Themyscira ကျွန်းနိုင်ငံမှာ ၀ှက်ထားခဲ့ပြီးနောက်မှာ Zeus ကံတော်ကုန်သွားတော့တယ်။”
ဒါဟာ Themyscira ကျွန်းနိုင်ငံက မင်းသမီးလေး Diana ငယ်ဘ၀ရဲ့ ညအိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေထဲက တစ်ခု … ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မေတ္တာတရားကို မျှဝေဖို့ ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့ Amazon တွေရဲ့ ပျိုးထောင်မှူအောက်မှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ သူ့အတွက် လူဆိုတာဟာ ပင်ကိုနှလုံးသားက မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေ …၊ ပြင်ပပယောဂကြောင့်သာ စိတ်ဓါတ်ယိုယွင်းတတ်ပြီး အချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်ကြတာ …၊ အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ကလည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ပေါ်လာမယ့် စစ်နတ်ဘုရား Ares ကြောင့်ဆိုတဲ့အတွေးက စိတ်ထဲမှာသံမှိူလို ငယ်စဉ်တည်းက စွဲမြဲခဲ့တယ်။
အဲဒါကြောင့် သူ တိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေ သင်ယူမှာကို တားမြစ်ထားတဲ့ အမေကိုယ်တိုင် လက်လျှော့ပြီး လိုက်လျောရတဲ့အထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က နောင်တစ်ချိန် Ares ပြန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ Zeus ချန်ထားခဲ့တဲ့ နတ်ဘုရားတွေကို သတ်လို့ရတဲ့ Godkiller ဓါးကိုသုံးပြီး နှိမ်နှင်းဖို့ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ သူလည်းအရွယ်ရောက်၊ ပညာစုံခါနီးမှာတော့ Diana မသိစိတ်ထဲက မျှော်လင့်နေခဲ့တဲ့ နေ့ရက် ရောက်ရှိလာတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ Themyscira သာမန်လူတွေ မမြင်နိုင်အောင် Zeus တန်ခိုးနဲ့လွှမ်းထားခဲ့တဲ့ အရံအတားထဲကို စစ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်း ၀င်ရောက်လာပြီး သူ့မျက်စိရှေ့မှာ ပျက်ကျသွားတာကို မြင်လိုက်ရတာပဲ။
လေယာဉ်ပျက်ထဲက Steve Trevor ရဲ့အသက်ကို ကယ်လိုက်ပြီး မိန်းမတွေချည်းရှိတဲ့ဒီကျွန်းမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့သူ ပထမဆုံးမြင်ဖူတဲ့ယောင်္ကျားသားကိုကြည့်ရင်း အံသြနေလို့မှ မဆုံးသေး … Trevor ရဲ့အနောက်ကို လိုက်လာကြတဲ့ ဂျာမန်စစ်တပ်တွေက Themyscira ထိရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့ လေ့ကျင့်မှူတွေနဲ့ပဲ တစ်ဘ၀တာ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ Diana စစ်ရဲ့အရသာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားလိုက်ရတော့တယ်။
ဒီကျူးကျော်သူတွေကို နှိမ်နင်းလိုက်နိုင်ပေမယ့် Steve Trevor ကိုစစ်မေးပြီးတဲ့နောက် ပြင်ပကမ္ဘာမှာ မဆုံးနိုင်တဲ့ စစ်ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို Diana တို့ သိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တာက ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Amazon တွေအနေနဲ့ ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ သူ့အမေ ဘုရင်မ Hippylyta ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ဒီစစ်ပွဲကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေ သေကြေနေကြတာကို သိနေရက်နဲ့ …၊ ဒီလိုစစ်ပွဲဖြစ်တာ စစ်နတ်ဘုရား Ares ပြန်ပေါ်လာတာကြောင့်ဆိုတာ သိနေရက်နဲ့ … လျစ်လျူရှူထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အမေဖြစ်သူကို နားမလည်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံး ဒီစစ်ပွဲကိုဖန်တီးနေတဲ့ Ares ကို သူတစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ Godkiller ဓါးကိုယူပြီး Steve Trevor နဲ့အတူ Themyscira ကျွန်းကနေ Diana ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။
IMDB ~ 8.2/10
RottenTomatoes ~ 93%
#MMDB_Reviews #WonderWoman #ASW
Translated by Xian Min
IMDb Rating 8.2 102,591 votes
Download HD မြန်မာ 530 MB 1 year admin
Download HD မြန်မာ 930 MB 1 year admin
Shared314 Facebook Twitter
Duck Duck Goose (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး